Iintsomi zaseRoma, ukusuka kwisiseko sayo ukuya kumaxesha aphakathi | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 07/05/2021 10:35 | isiko, eRoma
Iintsomi zaseRoma zinemvelaphi yazo IsiXeko esingunaPhakade. Njengoko uyazi, isiseko sakhe sinembali eyimbali emva kwayo, leyo URomulus kunye noRemus. Kodwa, ukongeza, isixeko esinembali engaka kufuneka sigcine amanye amabali asentsomini oya kuba nomdla wokuwazi.
Asizukukwazi ukukuxelela zonke, kodwa sinokuqinisekisa ukuba amabali esiza kukuxelela wona yinxalenye yamabali axabisekileyo aseRoma kwaye uyakonwabela ukuwazi. Akukho nto zinamabali ahambelana nayo ookumkani bokuqala, ne abalawuli abakhulu ukusuka kwixesha lakudala kunye nobumnyama Kwiminyaka ephakathi Kwisixeko esihle sase-Italiya (apha sikushiya inqaku malunga nezikhumbuzo zalo). Kodwa, ngaphandle kokuqhubela phambili, masihambe ngamabali amnandi ngeSixeko esiNgunaphakade.
1 Iintsomi zaseRoma, okoko kwasekwa isixeko
1.1 Intsomi yokusekwa kweRoma
1.2 Ukudlwengulwa kwabafazi beSabine, enye iNtsomi yamaRoma
1.3 Umgaqo we-Mazzamurelli
1.4 UCastel Sant'Angelo, umboniso weentsomi ezininzi zaseRoma
1.5 IPasetto di Borgo
1.6 Isiqithi saseTiber
Iintsomi zaseRoma, okoko kwasekwa isixeko
Njengoko sikuxelele, imvelaphi yaseRoma inemvelaphi yasentsomini. Kodwa kunjalo nesiqendu esidumileyo se- ukuthinjwa kweesabatha, Enkosi apho idolophu yakudala yaseRoma yakhula ngobusuku bexesha. Masihambe nayo yonke.
Intsomi yokusekwa kweRoma
URomulus kunye noRemus bancanciswa yingcuka
Imvelaphi yasentsomini yeRoma yaqala ngenkulungwane ye-XNUMX BC. Nangona kunjalo, le ntsomi yaseRoma iqala kwangaphambi koko. I-Ascanio, nyana ka UAneya, Iqhawe leTrojan, elisekwe kwiibhanki zeTiber isixeko sase UAlba Longa.
Kwiminyaka emininzi kamva, lo kumkani wabizwa Umvavanyi Kwaye umntakwabo Amulium wamhlutha esihlalweni. Kodwa ulwaphulo-mthetho aluphelelanga apho. Ukuze owokuqala angabinayo inzala enokubanga itrone, wanyanzela intombi yakhe, URea Silvia, ukuze abe yiVestal, eyayifuna ukuba ahlale eyintombi. Nangona kunjalo, u-Amulio okhohlakeleyo akazange aqwalasele ukuthanda kukaThixo Marte.
Lo wamitha amawele uRea akhulelwe URomulus kunye noRemus. Nangona kunjalo, xa bazalwa, ngenxa yokoyika ukuba ukumkani okhohlakeleyo uza kubabulala, babekwa ebhasikithini kwaye bashiyeka kuMlambo iTiber uqobo. Ibhasikithi yema bhuxe kufutshane nolwandle, kufutshane neenduli ezisixhenxe, apho yabonwa khona ngu Ingcuka elibhinqa. Wahlangula kwaye wancancisa abantwana kwindawo yakhe yokuhlala IPalatine Hill bade bafunyanwa ngumfundisi, wabasa ekhayeni lakhe, apho bakhuliswa ngumfazi wakhe.
Njengabantu abadala, aba bafana babini bamsusa u-Amulio endaweni ye-Numitor. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kuthi kwimbali yethu kukuba uRomulus noRemus baseke ikoloni yeAlba Longa kunxweme lomlambo ngokwawo, ngokuchanekileyo apho ingcuka-mazi ibibancancisile, kwaye iinkokheli zazo zabhengezwa.
Nangona kunjalo, ingxoxo malunga nendawo kanye esiza kwakhiwa kuyo isixeko esitsha yakhokelela kwimpikiswano embi phakathi kwezi zimbini eyayiza kuphela ngayo Ukusweleka kukaRemo ezandleni zomntakwabo. Ngokomxholo, uRomulus waba njalo ukumkani wokuqala waseRoma. Ukuba siza kuthathela ingqalelo ababhali bembali yakudala, yayingunyaka we-754 BC.
Ukudlwengulwa kwabafazi beSabine, enye iNtsomi yamaRoma
Ukudlwengulwa kwabafazi beSabine
Kananjalo nexesha likaRomulus lel ibali lokuthimba abafazi baseSabine, enye yamabali amaRoma athandwayo. Kuyatshiwo ukuba umseki wesixeko wamkela nabani na ovela eLazio njengommi omtsha ukuze abekhona.
Nangona kunjalo, yayingamadoda onke, okwenza ukukhula kweRoma kungabinakho. URomulus waqaphela iintombi zeesabatha, owayehlala kwinduli ekufutshane ye Ikota yokuqala kwaye waqalisa ukubaxhwila.
Ukwenza njalo, wenza ipati enkulu kwaye wamema abamelwane bakhe. Xa iiSabines zamangaliswa yile wayini, waxhwila iintombi zabo wabasa eRoma. Kodwa ibali alipheli apho.
Okwangoku, wayesele ephethe isixeko Tarpeia, owayethandana noKumkani waseLatinos. Njengokuba babebhengeze imfazwe eRoma emva kokuxhwilwa kweentombi zabo, intombazana leyo yenza isivumelwano kunye nenkosi ukuba izakumbonisa indlela yokungena ngokufihlakeleyo esixekweni ukuba ingamnika oko wayenako ngengalo yakhe yasekhohlo. Wayethetha ngesacholo segolide, kodwa, xa iiSabines zazisazi ukuba ufikelelo olufihliweyo luya eRoma, ukumkani wayalela amajoni akhe ukuba atyumle iTarpeii ngamakhaka awo, alayishwe ngokuchanekileyo ezingalweni zakhe zasekhohlo.
Nangona kunjalo, ukuphela kweli bali kunokunye okwahlukileyo. Ithi amaRoma, eyazi ngokungcatshwa kweli bhinqa liselula, amlahla eweni, kanye ukusukela ngoko, kwathiwa Iliwa leTarpeya.
Ekugqibeleni, kwabakho ukungqubana phakathi kweSabines namaRoma. Okanye, akuzange kwenzeke ngenxa yokuba amantombazana athunjiweyo bema phakathi kwemikhosi yomibini ukumisa umlo. Ukuba amaRoma aphumelele, baya kuphulukana nabazali kunye nabantakwabo, ngelixa amaSabines enjenjalo, baya kusala bengenamadoda. Ke, uxolo lwasayinwa phakathi kwezi zixeko zombini.
Isitalato iMazzamurelli, indawo yenye yeentsomi zaseRoma
Ukuba undwendwela Ukukhawuleza Roman, uya kufumana isitalato esincinci, ukuqala Icawa yaseSt. Chrysogonus, ifikelela phezulu leyo yeSan Gallicano. Le alley yeyokuba uMazamurelli. Kodwa ngoobani ezi zidalwa ezinesitalato eRoma ezinamagama emva kwazo?
Singabachonga kunye nabo bancinci iingqondi ezikhohlakeleyo ezo ziyinxalenye yazo zonke iintsomi zehlabathi. Baya kuba luhlobo lweeelves ezonwabela ukwenza amaqhinga amancinci kubantu abadlulayo kwaye, ewe, abo bahlala kweso sitrato.
Ngapha koko, elinye lamabali elenza eli bali lithi kwakuhlala umntu owayedume ngokuba ngumlingo ngokubona izidalwa ezingaphezu kwendalo. Indlu yalomntu igcinwe isendleleni kusithiwa ikhona haunted.
Nangona kunjalo, ayizizo zonke izinto ezimbi malunga ne-mazzamurelli. Kwabanye ababalisi beli bali laseRoma, zizidalwa eziluncedo ezinikezelwe ekukhuseleni abamelwane besitalato esinegama labo.
UCastel Sant'Angelo, umboniso weentsomi ezininzi zaseRoma
Ukongeza kwelinye lezona zikhumbuzo zibaluleke kakhulu kwiSixeko saNgunaphakade, iCastel Sant'Angelo ineentsomi ezininzi. Yakhelwe ukubakho Mausoleum woMlawuli uHadrian, phantse iphantse ibe ngamawaka amabini eminyaka yembali. Akumangalisi, ke, ukuba ibiyindawo yamabali amaninzi aqhelekileyo.
Eyona ethandwa kubo unobangela igama layo. Sikunyaka wama-590 wexesha lethu. Ubhubhani wesibetho etshabalalisayo wehlela iRoma nopopu UGregory Omkhulu waququzelela umngcelele. Njengoko yayisondela kwinqaba, yabonakala ngaphezulu kwayo isiphatha-zingelosi ukuba wayephethe ikrele ezandleni zakhe ukubhengeza ukuphela kobhubhane.
Ke ngoko, ayisiyiyo nqaba kuphela ebizwa ngokuba yi-de Sant'Angelo, kodwa ukongeza, isithunzi sengelosi enkulu sakhiwe phezu kwaso, emva kokuba sibuyiselwe izihlandlo ezininzi, usabona nangoku.
IPasetto di Borgo
I-Passetto di Borgo, yenye yemiboniso yeentsomi ezininzi zaseRoma
Asihambi kude nolwakhiwo lwangaphambili ukufumanisa amanye amanqaku aseRoma azele ngamabali kunye namabali asentsomini. bucala ngasekhohlo ipasipoti okanye indlela ebiyelweyo ijoyina, ngokuchanekileyo, inqaba yeSant'Angelo kunye IVatican.
Akumninzi kwisiqingatha sekhilomitha, kodwa ibiyindawo yazo zonke iintlobo ze iitapile ezivuzayo nabanye abefundisi ababefuna ukuzimela ngamaxesha emfazwe nokuphanga. Nangona kunjalo, ilivo lithi nabani na owela kuwo izihlandlo ezingamashumi asixhenxe uya kubona ukuba zonke iingxaki zabo ziphela kanjani.
Eli bali liyimbali yamapasetto di Borgo kangangokuba ibonakale kwiifilimu ezininzi, kumdlalo kamabonakude nakwimidlalo yevidiyo.
Sigqiba ukhenketho lwethu lweentsomi zaseRoma kwesi siqithi, onokuzibona namhlanje embindini weTiber. Senziwe njengesikhephe kwaye asimalunga neemitha ezingama-270 ubude neemitha ezingama-70 ububanzi. Nangona kunjalo, bekungumxholo wamabali asentsomini ukusukela mandulo.
Ngapha koko, zichaphazela inkangeleko yazo. Kuthiwa kukumkani wokugqibela waseRoma, UTarquinius oBalaseleyo, waphoswa emlanjeni ngabantu bakowabo. Wayengumntu okhohlakeleyo owayebile nengqolowa yabo. Kungekudala emva kwesi siganeko, isiqithi saqala ukubonakala kwaye amaRoma acinga ukuba aqalele ukubulela kumdaka oqokelelekileyo ojikeleze umzimba wenkosi, olilungu lawo elililo, ngokuchanekileyo, ingqolowa awayeyibile.
Kuyo yonke le nto, iTiberina yayihlala ihlwayela uloyiko phakathi kwabemi baseRoma. Oku kwaqhubeka kangangeenkulungwane ezininzi de, ngexesha lobhubhane bhubhane, a inyoka (uphawu lweyeza) esiphelise isifo. Njengombulelo, amaRoma akha Itempile ngozuko luka-Aesculapius kwisiqithi kwaye wayeka ukoyika ukusityelela. Siyakukhumbuza ukuba eli nani yayinguthixo wamayeza waseRoma.
Ukuqukumbela, sikuxelele ezinye zezona zidumileyo iintsomi zeroma. Nangona kunjalo, isixeko esidala njengale kufuneka sibe nezinye ezininzi. Phakathi kwezo zishiyekileyo kumbhobho kwaye mhlawumbi siza kukuxelela kwelinye inqaku lelo libhekisa kulo Umlawuli uNero kunye ne-Basilica yaseSanta Maria del Pueblo, Enye ye UDioscuri Castor kunye nePollux, ye Umlomo wenyaniso okanye uninzi olunokuba ngumlinganiswa ophambili Hercules.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » I dolophu » eRoma » Iintsomi zaseRoma